यी ५ कारणले चुनाव हार्दैछन् चन्द्र ढकाल — Motivatenews.Com
काठमाडौं – नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको ५४ बार्षिक साधारण सभा मंसिर ११, १२ र १३ गते काठमाडौंमा हुँदैछ । सो सभाले आगामी कार्यकालका लागि नयाँ नेतृत्वसमेत चयन गर्नेछ ।
महासंघको विधानमा बरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्को कार्यकालका लागि सोतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था भएकाले बरिष्ठ उपाध्यक्षमा चुनावी भिडन्त हुँदैछ । बरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि बर्तमान उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल र किशोर प्रधान प्यानलै बनाएर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन । कोभिड १९ महामारीका बेलामा सर्वसम्बत गरेर भिडभाड कम गर्ने प्रयास गरिएपनि चन्द्र ढकालका कारण सहमति भाँडिएको छ । उनको दम्भ र अहंकारका कारण सहमति भाँडिएको पूर्वअध्यक्षहरुको भनाई छ ।
दुबै प्यानका उमेद्वारहरु आ–आफ्नो प्यानल विजयी हुने दावी गरिरहेका छन । तर विभिन्न कारणले किशोर प्रधानले चुनावी नतिजा आफ्नो पोल्टामा पार्ने धेरैको आँकलन छ । जिल्ला/नगरका अधिकांश अध्यक्षहरुले किशोर प्रधानलाई समर्थन गर्ने भएपछि उनको जित निश्चित जस्तै भएको छ । चन्द्र ढकालका पक्षमा पनि चुनावी माहोल सकारात्मक भएपनि जितका लागि प्रयाप्त छैन् । अहिले आउने कार्यसमिति भनेको अध्यक्ष सहितको टिम हो । अध्यक्ष शेखर गोल्छालाई आफ्नो एजेण्डाहरु लागु गराउन आफूले चाहेको टिम आबस्यक पर्छ । त्यही भएरपनि कार्यसमितिमा उपाध्यक्षदेखि सदस्यसम्म कम्तिमा बहुमत सदस्यहरु गोल्छाले चाहेका व्यक्ति भएभने उनलाई काम गर्न सहज हुनेछ ।
गोल्छाले किशोर प्रधानको टिमलाई समर्थन गरेर ‘किशोर जिताउँ अभियान’ चलाइरहेका छन । उनी आउने कार्यसमितिलाई संचालन गर्न, परिचालन गर्न र निर्णय प्रक्रियामा सहज होस भनेर किशोर प्रधानको प्यानलाई समर्थन गरेका हुन । ढकालले यी लगायत विभिन्न ५ कारणले चुनाव हार्ने आँकलन गरिएको छ । ती निम्न प्रकार छन् ।
१) उमेद्वार छनोटमा त्रुटी
महासंघको निर्वाचनमा चन्द्र ढकालको प्यानल उमेद्वार छनोटमा चुकेको छ । ढकाल प्यानलबाट जिल्ला–नगर उपाध्यक्षमा गुणनिधि तिवारी, वस्तुगत उपाध्यक्षमा उमेशलाल श्रेष्ठ र एसोसिएट उपाध्यक्षमा रामचन्द्र संघाईलाई उमेद्वार बनाएको छ । त्यस्तै प्रधान प्यानलबाट जिल्ला–नगर उपाध्यक्षमा दिनेश श्रेष्ठ, वस्तुगत उपाध्यक्षमा अञ्जन श्रेष्ठ र एसोसिएट उपाध्यक्षमा सौरभ ज्योति उम्मेदवार छन् ।
ढकाल प्यानलबाट जिल्ला–नगर उपाध्यक्षका उमेद्वार गुणनिधि तिवारी चर्चामा रहेकै नाम हो । चुनाव जित्ने सम्भावना पनि थियो तर हेटौडाका व्यापारी अरुणराज सुमार्गीलाई ढकाल प्यानलले बाइपास गरेपछि उनको जुनाव जित्ने सम्भावना दुर भएको छ । कुनैवेला ढकालको चुनाव प्रचार-प्रसार गर्न हिडेका सुमार्गीलाई अपमानित हुने व्यवहार देखाएपछि उनी ढकाललाई देखाइदिन्छु भन्दै दिनेश श्रेष्ठको प्रबक्ता भएर हिडेका छन् । बागमति प्रदेश र प्रदेश २ मा राम्रो पकड भएका सुमार्गीलाई बाइपास गरेर ढकाल प्यानलले गल्ती गरेको छ । ढकाललाई आउने जिल्ला–नगरका केही भोट सुमार्गीले काट्ने छ ।
त्यस्तै बस्तुततर्फका उमेद्वार उमेशलाल श्रेष्ठ पनि विवादित छन । औषधि उत्पादक संघबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उनी आफूले आफैलाई भोट हाल्न पाउने छैनन् । नेपाल औषधि उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठलाई उमेद्वार मात्र हुनेगरी सिफारिस गरिएकाले उनले भोट हाल्न पाउने छैनन् ।
औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष नारायण बहादुर क्षेत्रीले महासंघको निर्वाचनका लागि औषधि उत्पादक संघको मुख्य प्रतिनिधि आफू नै भएको दाबी गर्दै भोट हाल्ने अधिकार आफूलाई मात्र भएको बताए । उमेशलाल श्रेष्ठ संघको साधारण सदस्यसमेत नरहेको चर्चा चलेको छ । श्रेष्ठ आफै मतदाता छैनन् भने उनलाई कसले भोट हालेर जिताउला, खै ?
त्यस्तै, वस्तुगत उपाध्यक्षतर्फ पनि सौरभ ज्योतिकै पल्ला भारी छ । रामचन्द्र संघाइभन्दा ज्योति सबैसँग घुलमिल गर्नसक्ने स्वभाव भएकाले उलाई मतदाताले विश्वास गर्नेछन् ।
२) पूर्वअध्यक्षहरुको असहयोग
चन्द्र ढकाललाई हराउन बर्तमान अध्यक्ष, भावि अध्यक्ष र सबै पूर्वअध्यक्षहरु (१ जना बाहेक)ले चुनावी अभियाननै चलाएका छन । सर्वसम्बत गर्ने पूर्वअध्यक्षहरुको योजनालाई अस्वीकार गरेको भन्दै सबैजना चन्द्र ढकालको विपक्षमा उत्रिएका छन । उनीहरुले भिडियो सन्देश मार्फत किशोर प्रधानलाई विजयी गराउन देशभरका मतदाताहरुलाई अपिल गरिरहेका छन् ।
‘यो पटक किशोर प्रधानलाई, अर्को पटक चन्द्र ढकाललाई’ भनेर चन्द्र ढकालको विपक्षमा मत मागिरहेको छन् । महासंघमा ठूलो प्रभाव राख्ने पूर्वअध्यक्षहरुले किशोर प्रधानलाई समर्थन गरेपछि चन्द्र ढकालको मनोवल कमजोर भएको छ । उनको पक्षमा विवादित उद्योगी, कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेका चण्डिराज ढकालले मात्र सहयोग गरेका छन । मतदाताको मनोविज्ञान पनि आजसम्म नेतृत्व दिएर यहाँसम्म ल्याएको संस्थामा गलत नेतृत्व आवस भन्ने सोचेको त न होला भन्ने परिसकेको छ । आगामी अध्यक्षका बारेमा पूर्वअध्यक्षहरुको निर्णय गलत नहुने मतदाताको बुझाई छ । त्यही भएर धेरैजसो नगर–जिल्लाका मतदाताहरुले किशोर प्रधानलाई मतदान गर्ने मोटिभेटसँगको कुराकानीमा बताएका छन ।
३) कालोसूची हटाउन जोडबल
चन्द्र ढकाललाई जिताउन न्वारन देखिएको बल प्रयोग गरेर कस्सिएका छन् महासंघका पूर्वअध्यक्ष चण्डिराज ढकाल । चन्द्र ढकालको पुछार समातेर बालबाल जोगी बन्नबाट बचेका महासंघका पूर्वअध्यक्ष चण्डिराज ब्यक्तिगत स्वार्थका कारण उनको प्यानलमा लागेका छन । उनले सहयोग गरेर महासंघको अध्यक्ष बनेका कोही–कसैले उनको कुरा नसुनेपछि अब आफ्नैलाई बनाउन पर्छ भनेर कम्मर कसेर लागेका छन् ढकाल । उनले स्वार्थ राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा रहेको एक अर्व ५० करोडको ऋण मिनाह गरि कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा रहेको नाम हटाउनु हो ।
यसअघि महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणालाई आफूले जिताएको भनेर जस लिएर उक्त काम गराउन लगाएका थिए तर राणाले उनले भनेको नमानेपछि उनी रुष्ट भएका थिए । पछिल्लो समय शेखर गोल्छालाई पनि आफूले जिताएको भन्दै हल्ला फैलाएर हिडेका थिए । गोल्छाले पनि उनको गैरकानुनी कामको समर्थन नगरेपछि महासंघको विधान परिवर्तन गर्ने भनेर प्रस्ताव ल्याए । बरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छालाई अध्यक्ष बन्नबाट रोक्नका लागि ल्याएको उक्त प्रस्तावको चर्को विरोध भएको थियो । त्यही प्रस्तावका कारण चण्डिराज ढकालसँग गोल्छा रिसाएका थिए । महसंघलाई प्रयोग गरेर कालोसूचीबाट हट्न हर कोसिस गर्दापनि असफल भएपछि चण्डिराज अहिले चन्द्र ढकालको पुछर लागेका हुन् ।
चण्डिराज ढकालले १६ बर्षअघि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ‘मोमेन्टो एपेरल्स’ नामको कम्पनीका लागि ३१ करोड ऋण लिएका थियो । शक्तिको दुरुपयोग गरेरै चण्डिराज ढकालले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट लिएको उक्त ऋण अहिलेसम्म पनि तिरेका छैनन् ।
उनले यही कम्पनीका लागि भनेर लिएको अन्य निजी (पब्लिक) बैंकहरुको ऋण तिरिसकेका छन् । तर सरकारी स्वमित्वको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको ऋण तिर्न उनले आनाकानी गरिरहेका छन । निजी बैंकको ऋण तिर्न पैसा हुने तर सरकारी बैंकको ऋण तिर्न नसक्ने यो कस्तो नियत हो भनेर व्यवसायीहरुले वहस चलाइरहेका छन् ।
सर्वसाधारणले ऋण नतिर्दा लिलामीमा लैजाने बैंकले चण्डिराज ढकाललाई भने अहिलेसम्म छुट दिदै आएको छ । ‘यस्तै प्रकारको ऋण अरु कोही व्यवसायीले लिएर नतिरेको भए बैंकले धितोमा राखेको चल अचल सम्पती लिलाम गरेर उहिल्यौ ऋण असुली गरिसकेको हुने थियो’, एक व्यवसायीले भने, ‘तर शक्तिको आडमा कसको के लाग्ने रहेछ र ।’
उद्योग बाणिज्य महासंघ केही समयअघि उनको ऋण मिनाह गर्न भनेर सति नै गएको थियो । त्यस्तै अर्थमन्त्रालयले समेत ऋण मिनाह गर्न बैंकलाई चर्को दवाव दिएको थियो । अर्थमन्त्रालय र महासंघले ऋण मिनाह गर्न दवाव दिएकै समयमा बैंक आफै समस्यामा भएकाले कसैको दवावको केही चलेन । र उनको ऋण अहिलेसम्म कायमै छ ।
उनले ऋणको किस्ता र ब्याज नतिरेपछि राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले कालोसूचीमा राखेको हो । अहिले सावा, ब्याज र जरिवाना गरेर उनको ऋणको सीमा डेढ अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथि पुगेको छ । ‘कसैको ऋण तिर्नका लागि देशभरका उद्योगीहरु चन्द्र ढकालको सति जान मिल्छ ?’ एक व्यापारीले भने, ‘ढकालले एक कार्यकाल उपाध्यक्ष बनेर अर्को कार्यकालमा बरिष्ठ उपाध्यक्ष हुदा उनको के वित्ने हो ? यो चोटी किशोर दाई जिताउने हो । अर्को चोरी चन्द्र दाई जिताउने हो । कसैको स्वार्थ पुर्तिका लागि कोही व्यवसायी सति जाँदैन ।’
चण्डिराज ढकाल छिटो भन्दा छिटो चन्द्र ढकाललाई महासंघको अध्यक्ष बनाएर ऋण मिनाहको औपाचारिक निर्णय गराउन चाहान्छन् । त्यही निर्णयको दवावमा बैंकको ऋण मिनाह हुने उनको विश्वास छ ।
४) पैसा बाँढेको हल्ला
चन्दा ढकालले देशभरका आफू नजिकका व्यवसायीहरुलाई पैसा बाँढेको आरोप लागेको छ । ढकालले आफू नजिकका व्यवसायीहरुले नेतृत्व गरेको संघहरुलाई बैंकको संस्थागत सामुदायिक उत्तरदायित्व अन्तरगगतको रकम दुरुपयोग गरेर वितरण गरेको आरोप छ ।
उनले बैंककोे ३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ आफू निकटका जिल्ला अध्यक्षहरु मार्फत गएको माग–फागुणमा वितरण गरेका थिए । विभिन्न मेला महोत्सवहरुमा ढकालले बैंकको तर्फबाट गैरकानुनी रुपमा संस्थागत सामुदायिक उत्तरदायित्वको रकम खर्च गरेका थिए । यो कुरा थाहा पाएका अरु संघका अध्यक्षहरुले विरोध जनाएका थिए । ढकालले कहिँ विपक्षमा रहेका व्यापारीलाई फकाउन त कहिँ आफ्ना नजिकका अध्यक्षलाई खुशी पार्न पैसा बाँढेका थिए ।
अन्य उद्योग बाणिज्य संघलाई पैसा दिएको र आफ्ने संस्थालाई नदिएको भन्दै धेरै जना उनीबाट रुष्ट भएका थिए । ती रुष्ट भएका देशभरका व्यवसायीहरुले पैसामा किन्न खोजेको भन्दै आगामी चुनावमा देखाइदिने बताएका थिए ।
त्यही भएर अहिले देशभरका अधिकाँश जिल्ला नगर अध्यक्षहरु किशोर प्रधानको पक्षमा उभिएका छन् । किशोरको पक्षमा प्रदेश १, २ बागमति प्रदेश, लुम्बीनी प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेश खुलेरै लागेका छन् भने गण्डकी प्रदेशमा मात्र चण्द्र ढकालको बर्चस्व छ । कर्णाली प्रदेशमा लगभग बराबर मत रहेको बुझिएको छ ।
५) अध्यक्षले चाहेको कार्यसमित
चन्द्र ढकाल पराजित हुने अर्को कारण हो उनलाई भावी अध्यक्षको साथ नहुनु । अध्यक्षले चाहेको कार्यसमिति भयो भने महासंघका पक्षमा र व्यवसायीको हितमा काम गर्न सहज हुन्छ । काममा सहयोग गर्ने, निर्णयमा अवरोध नगर्ने र निर्णय कायन्वयनमा सकारात्मक भुमिकाका लागि आफूले चाहेको टिमको आवस्यकता पर्छ । टिम वर्कले नै सबैको हित हुने कुरा बुझेका व्यवसायीहरुले यो पटक शेखर गोल्छालाई सहयोग गर्न पनि किशोर प्रधानलाई भोट हाल्ने छन् ।
महासंघमा शेखर गोल्छाका एजेण्डालाई कार्यन्वयन गर्न र महासंघलाई हस्तक्षपकारी भुमिका निर्वाह गर्नका लागि व्यवसायीहरुले देशभरबाट किशोर प्रधानलाई मतदान गर्ने छन । त्यस्तै ढकालको महासंघमा लामो समय योगदान छैन् । उनी महासंघमा आवद्ध भएको जम्मा-जम्मी १० बर्ष भएको छ । दशै बर्ष उनी कार्यसमितिमा रहेका काम गरिरहेका छन् । तर उनी भन्दा अढाई गुणबढी महासंघका लागि समय दिइसकेका छन् किशोर प्रधानले । उनले २८ बर्ष महासंघको निस्वार्थ सेवा गरिसकेका छन । त्यसैले व्यवसायीहरुले यो पटक ‘किशोर दाई जिताउने अभियान’ चलाइरहेका छन् । र जित निश्चित रहेको बताइरहेका छन ।